Canada's first Blockchain ETF approved by regulators - Tray News - Blockchain News
Kukadzi 3, 2018 arun
The Ontario kuchengetedzeka Commission akafarirwa Canada blockchain mukutsinhana-mhindu Fund wokutanga (ETF), inosidzikwa kuti vomurova pamusoro Toronto Stock Exchange svondo rinouya.
Harvest Portfolios, yakazvimirira Canadian mubhizimisi utariri kambani, nyaya yacho rokutanga nyaya dzemapepa nokuda kwayo Blockchain Technologies ETF muna January, kutsvaka kupa Canadian vanoita pamwe mukana kutenga kupinda blockchain Michina zvekutepfenyura, maererano Globe and Mail.
The mari achaita mari “noumhizha kuchengetedzeka pamusoro issuers pachena, zvakananga kana kuti zvisina kunanga kuti kukura uye Implementation kuti blockchain uye vakagovera ledger michina,” Unoibva Portfolios mashoko akati. The kambani anoda kuti ETF kuti chamber blockchain zvemichina muzvirongwa, mirroring yayo Harvest Blockchain Technologies Index.
Maererano Globe and Mail, mamwe makambani maviri Canadian, First Trust Portfolios Canada uye ichishanduka Kwayo Group Inc., vari kutsvaka vomurova mari blockchain, uye makanyora prospectuses dzavo wekutanga regulators svondo rino.
Previous Post:Double Digit Kurasikirwa Tsvaira Crypto Chakanaka Market
Next Post:The itsva dzakati PHANTOM kuchaita kukwikwidzana Mheni Network